Su'aalaha La Weydiiyo - Zhangzhou Sunny Flower Import Oo Dhoofinta Co., Ltd.
Qiimaheena waa isbadali karaan iyadoo kuxiran tirada. Waxaan horumarinnaa sicirka jaranjarooyinka, kolba tirada sii kordheysa, qiimaha ayaa sii yaraanaya.
Haa, waxaan ubaahanahay dhammaan amarrada caalamiga ah inay lahaadaan tirada ugu yar ee socota. Wax soo saarka kala duwan waxay leeyihiin shuruudaha MOQ ee kala duwan, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Waxay kuxirantahay sheyga, waqtiga dhalmada waa 7-30 maalmood kadib helitaanka deebaajiga.
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Hawada caadi ahaan waa habka ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. Badda agteeda ayaa ah xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Sida saxda ah qiimaha xamuulka waa in mid mid loo hubiyaa iyadoo ku xiran tirada iyo habka. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ma bixin kartaa dukumiintiyada ku habboon?
Haa, waxaan ku bixin karnaa dukumiintiyada badankood oo ay ka mid yihiin Shahaadada Phytosanitary Certificate, Fumigation Certificate, Certificate of Oadag, Caymis, iyo dukumiintiyo kale oo loo baahan yahay.
T /T iyo Western Union waa la aqbali karaa.
Bad ahaan: 30% deebaaji ah kahor, 70% dheelitir ku ah nuqulka B / L.
Bhawada: 100% bixinta kahor.